Articles tagged 'royal harare'
JC Ritchie in good start 20 April 2018 HARARE - Last year’s champion JC Ritchie has began the defence of his Old Mutual Zimbabwe Open Golf Tournament title with a solid six-under par 66 in yesterday’s opening round of the Sunshine Tour-sanctioned event. Martin Rowher, Vaughn Groenewald and Andrew van der Knaap are in second place a...
Ritchie wins Zim Open 24 April 2017 HARARE - There is bound to be ecstasy for one man and anguish for the other during the final round of any golf championship. This is exactly what happened yesterday when JC Ritchie beat Trevor Fisher Jnr on the second play-off hole to lift the Zimbabwe Open and walk away with a R285 300 cheque...
Hugo enjoys fast start 21 April 2017 HARARE - Jean Hugo started fast in the first round of the 2017 Zimbabwe Open yesterday and he kept his foot on the pedal to card a seven-under-par 65 for a one-stroke lead at Royal Harare Golf Club. And it could have been even better had he not made bogeys on seven and 13, but that didn’t both...
Zim confident at Africa Champs 28 March 2017 HARARE - Zimbabwe's junior golf teams are aiming for a top finish at the Africa Junior Golf Championship as they bid to secure passage to the Toyota World Junior Golf Challenge in Japan. The tournament tees off this morning at Royal Harare Golf Club with at least 12 national teams from across ...
Mketekete confident ahead of Zim Open 9 April 2014 HARARE - After a fabulous start to his 2014 season, local golfer Ignatius Mketekete is hoping to carry his impressive form into this week’s Golden Pilsner Zimbabwe Open. The Zimbabwe Open, the country’s premier golf tournament which is sanctioned by the Sunshine Tour, starts tomorrow at Royal ...